पाँच दिनपछि पप्पी खुसी र बोका दुखी देखिए। उसले पशु अधिकारकर्मीहरूलाई सम्झ्यो तर केही उपाय थिएन। रुँदैरुँदै मुखिया बाकोपछि लाग्यो। केही समयको हिंडाइपछि मान्छे नै मान्छे भएको ठाउँ आयो। एक भुसतिघ्रे भन्दै थियो, ‘यसको मार मै हान्ने हो, मुखिया बा।’ बोकाले यसो मुन्टो उठाएर के हेरेको थियो। हातमा खुकुरी समातेर मार हान्न खुराफात गर्ने उही पशुअधिकार कर्मी थियो।
अमेरिकी सपना र संघर्षको दस्तावेज ‘सपनाको उडान’
अमेरिकी केटीसित कागजी विवाह गर्दा पनि तिनले माग्ने मोटो रकम लिएर ती सम्पर्कविहीन भइदिने स्थिति समस्या उपन्यासमा आएका छन्। यी कथ्यबाट अमेरिकामा स्थायी बसोवास गर्न नेपालीले भोग्नुपरेका समस्याका विभिन्न पाटालाई देखाउन खोजिएको छ।
अनुपमा रेग्मी १३ माघ २०७८ बिहीबार ८ मिनेट पाठ
घाम उहीं छ पानी उहीं छ बदलिएन परिवेश
घाम उहीं छ पानी उहीं छ बदलिएन परिवेश, बद्लियो जो थियो केवल पात्र मात्र भाखाभेष। सकिएन बुझेर बुझी खेल समय बदलिए पनि,जो मीठो सपना तर्केर गयो नमीठो भो जिन्दगानी।
केही छटपटी अधुरो रह्यो, केही पीडा अधुरो रह्यो।प्रियतमा तिम्रो प्रीतबिना, मेरो प्रेम सधैं अधुरो रह्यो।
हो साँच्चै नै तिमीमा केही छ र त सबै मान्छे झुमिराछ्न्,तिम्रो साथ नपाउनेहरू पनि तिम्रै फोटो हेरी चुमिराछ्न्। तिम्लाई यसको असर र भान नै कहाँ पर्या छ र सानी,तिमी आकाशमा उडिराछ यहाँ मान्छे भने घर घुमिराछ्न्।
नराम्रो कुरामा चित्त लगाइँदैन, अर्काको काँध चढेर रमाइँदैन।हिरामोती जडेकै भए तापनि, पाउजुलाई शिरमा सजाइँदैन।
महिलाको ज्यान गयो
जति छन् सामाजिक कुप्रथा, बिस्तारैबिस्तारै घटाउनुपर्छ, यो समाज चेतनशील पार्न, शिक्षित वर्ग खटाउनुपर्छ। दाइजो प्रथा अनि छाउपडीले, धेरै महिलाको ज्यान गयो, यस्ता प्रथा झन् हामीले, जरैदेखि हटाउनुपर्छ।
म हिंडेकै बाटो तिमीले हिंड्नुपर्छ भने मैले कुल्चेकै डोबलाई तिमीले कुल्चिनुपर्छ भने हामी बिचको असमानता खै कहाँ रहन्छ र?
स्वदेशी बादलहरूबारे गहिरो अनुसन्धान गरे। अन्तिम प्रयासका लागि पुनः मिटिङ बसे। सबैलाई एकान्तमा लगियो। केही शब्द सुनाइयो। यो सुन्नेबित्तिकै सबैको अनुहार हँसिलो भयो। विदेशी बादलहरूको मनमा च्वास घोच्यो। - कस्तो विडम्बना, सेवाका लागि बर्सिन पनि कमिन बाँडेर राजी गराउनुपर्ने?
परन्तु रगतको रङ रातो छ आँसुको रङ पानी जस्तै छ आँसु झरेपछि सुक्छ अक्सर सुकेपछि देखिंदैन रगत जम्छ र टाटो बस्छ जसलाई तिमी छेउमा आउँछ्यौ र कोट्याउछौ।
बालसुलभ रहरहरूको अरुणोदय हुन्छ फेरि हठी रहरहरू सूर्य निल्न अनि उकेल्न पनि उद्धत भइदिन्छन्।
सर,सर–सर, त्यो पार्वता छे नि छ क्लासकी हो, त्यो सापले टोकेर मरी। हिजो स्कूल छुटेर घर पुग्दा छाउ भइछ। छाउगोठमा सुतेकी थिई। राति कतिबेला सापले टोकेर मरिछ। कसैले पनि थाहा पाएनन्। त्यो छाउगोठमा सुत्न मानेकै थिइन् रे।
मेरो कानमा शिक्षकले भनेको कुरा गुन्जदै थियो,‘कुनै समयको होनहार विद्यार्थी खुसीलाई लिन नजानेर र दुखलाई झेल्न नसकेर आज यो हविगत भयो।’